Ladoany : nitombo ny fanafarana entana avy any ivelany | NewsMada
Ladoany : nitombo ny fanafarana entana avy any ivelany
Nahatratra 468,6 miliara Ar ny hetra nampidirin’ny sampandraharahan’ny haban-tseranana na ny ladoany, nanomboka ny janoary hatramin’ny marsa 2017 raha toa ka 417,4 miliara Ar ny vinavina. Izany hoe, nitombo 112 % io tahan’ny fampidiran-ketra io raha oharina ny vinavina napetraka, ary nitombo 39% raha oharina ny telovolana voalohany ny taona 2016.
Araka ny fanazavana nomen’ny sampandraharan’ny ladoany, midika ireo tarehimarika ireo fa nitombo ny lanjan’ny fanafarana entana avy any ivelany niditra eto Madagasikara. Niteraka harena sy fidiram-bola ho an’ny eto an-toerana ihany koa izany.
Eo koa ny fanatsarana ny fitaovana enti-miasa, toy ny fampiasana ny niomerika amin’ny fandoavan-ketra, iarovana ny fivezivezen’ny vola, sy antoka ho an’ny fandoavana haban-tseranana ary ny fanamorana ny fikirakirana ny antontan-taratasy.
Manamafy ny fanaraha-maso ny tahan’ny fampidiran-ketra ny vokatra, ankoatra ny solika koa izany. Mikasika ity farany (solika), nampisy elanelana teo amin’ny haba voaray sy ny novinavinaina, ankoatra ny fiantraikan’ny vidin-tsolika ny fahatongavan’ny solika nentin’ny sambo niditra eto Madagasikara ny tapaky ny volana marsa teo.